Tsy misy farany ny trafika: sarona indray ny sokatra 7 347, olona telo voasambotra | NewsMada
Iray volana taorian’ny nanamelohan’ny fitsarana enina taona an-tranomaizina sy lamandy 100 tapitrisa Ar ireo mpanao trafikana sokatra any atsimo, sarona indray ny sokatra miisa 7 347 hafa saika haondrana antsokosoko tao Tongobory, Toliara, andro vitsivitsy lasa izay. Nosamborina, noho izany, ny olona telo.
Tsy mety fay! Taorian’ny fitsarana ny 25 oktobra 2018 lasa teo ka nahavoaheloka enina taona an-tranomaizina ireo mpanao trafikana (lehilahy iray sy teratany sinoa roa lahy) zana-tsokatra miisa 10 000 miampy fandoavana lamandy mitentina 100 tapitrisa Ar, olona telo hafa (vehivavy iray sy lehilahy roa) indray nahatrarana zana-tsokatra miisa 7 347 tao Tongobory (avaratra atsinanan’i Toliara), omaly. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny WWF, fiaraha-miasa teo amin’ny tompon’andraikitra misahana ny fiarovana ny ala sy ireo biby arovana niaraka tamin’ny zandarimaria any an-toerana ny nahasamborana ireto mpanao trafikana sokatra ireto. Nahazo loharanom-baovao momba ny fisian’ireto olona manana zana-tsokatra marobe ireto ny tompon’andraikitra misahana ny fiarovana ny ala ka nampandre avy hatrany ny zandary izay nidina avy hatrany tao Tongobory. Hita tao amin’ireto olona voahirohirohy ireto ny zana-tsokatra miisa 7 347. Efa maty kosa ny 32 amin’ireto sokatra ireto noho ny tsy fahatomombanan’ny toerana nipetrahan’izy ireo. Nosamborin’ny zandary avy hatrany ireto olona telo ireto. Nilaza ireto voarohirohy ireto, nandritra ny famotorana nataon’ny zandary, fa efa-bolana izay ny nitazonana ireto zana-tsokatra ireto tao amin’io toerana nahatrarana azy ireo io. Araka ny fanazavan’ny kaomandin’ny borigadin’ny zandarimaria ao Tongobory, nalaina tany amin’ny faritra Androy, teo anelanelan’i Toliara sy i Taolagnaro ary tamin’ny alalan’ny tambajotra goavana, ny nahatrarana ireto zana-tsokatra ireto.
Mitombo hatrany ny mpanao trafika…
Nahitana kesika maromaro efa vita tsara nahafahana mitondra ireto zana-tsokatra ireto tao an-toerana, nandritra ny fisavana nataon’ny zandary. Misy amin’ireo kesika ireo no efa nampiasaina ary misy mari-pamantarana amin’ny alalan’ny tarehimarika izay midika ho efa nifindrafindra toerana maro. Nitombo hatrany ny tahan’ny fanaovana trafikana sokatra, nanomboka tamin’ny volana avrily 2018, izay nahatrarana 19 000 sokatra tamin’ny alalan’ny hetsika nataon’ireo tambajotra miaro ny fanondranana tsy ara-dalàna ny harena natoraly ao amin’ny faritra Atsimo Andrefana. Tambajotra ahitana ny avy amin’ny fiarahamonim-pirenena, ny sampandraharam-paritry ny tontolo iainana, ny ekolojia ary ny ala, ny Bianco, ny fitsarana ao Toliara, ny faritra Atsimo Andrefana, ny polisy sy ny zandary, ny sampandraharaham-paritry ny fifandraisana, ny sampandraharaham-paritry ny harena an-kibon’ny tany, ny MNP (Madagascar National Parks) ary ny WWF.
Nohamafisin’ny WWF hatrany fa ho fametrahana vahaolana iraisana hiadiana amin’ny trafikana sokatra, hisy ny fihaonambe ao Toliara, handraisan’ny minisiteran’ny Tontolo iainana, ny ekolojia ary ny ala anjara, ny 23 novambra 2018.